Phytic acid ukudla: inzuzo, umonakalo, futhi ukusetshenziswa izilinganiso
Muva nje ungezwa leli gama lapho emithonjeni ehlukene: ". Ummese ku vegans emuva" Kusho ukuthini lokhu futhi lihlotshaniswa kanjani nge phytic acid? Okokuqala, siphawula ukuthi libhekisela kuphela ukudla. Akukho ukubukwa ngemibono noma ezinye hhayi kunakwe.
Abantu abaphethe izinhlobo ezithile zokudla, vegans abathi abe umthombo oyinhloko ukudla equkethe into okuthiwa phytic acid. Isilinganiso Ochwepheshe kulo liba idumela. Sifunda emaphutheni imininingwane sihloko kungani.
Kanjani phytic acid
Sekuyisikhathi eside abantu abaningi bezwa ukuthi okusanhlamvu lonke, amantongomane eluhlaza kanye imbewu, bran nokusabhontshisi ngokhiye ukudla okunempilo. Kodwa muva nje Ngaqala dating, futhi umbono ohluke ngokuphelele.
Iqiniso liwukuthi kulezi kanye ezithile nokunye ukudla aqukethe phytic acid. Lokhu kuvimbela kwakwakhe phosphorus, i-calcium, okusansimbi, i-zinc ne-magnesium. Phosphorus is ukuba kubalulekile ukuze amathambo namazinyo ezaziwayo. Kuqukethwe imikhiqizo yemifino, lilondolozwe ngaphakathi phytic acid, ngenxa lapho umuntu ayitholakali. Ngaphezu kwalokho, phytic acid kuphazamisa enzyme ezifana trypsin futhi pepsin, okuyinto ngezamadodana ukugaya.
Njengoba ungacabanga, lokhu akusho ukuthi kumelwe siyiyeke le mikhiqizo phakade. Lapho ukuthi la malungiselelo kungukuthi kungase kutholakale ngokugcwele, futhi ososayensi basaqhubeka ukuphikisana ngokuthi isenzo has phytic acid. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ziphathwa ngezindlela ezimbili. Futhi sizobheka kuze kube yilolo umbono, ogama labo abanamathela melanani ndaba.
Inani elikhulu phosphorus eziqukethwe imikhiqizo ukudla oshiwo ngenhla ngokuyinhloko phytic, okuyile ayikwazi yamukeleke. Uma Ukudla iqukethe phytic acid ukudla semali, ke ihlangana calcium, ngaleyo ndlela kwakhele chelates zingaxazululeki. Ngakho, njengebalulekile izakhi mkhondo ezifana sasekhaya ne-calcium, umzimba ulahlekelwa. Ngaphezu kwalokho, kuyaziwa ukuthi isibalo esikhulu nezinye izinto ezibalulekile - magnesium ne-zinc ngaphandle acid ugxile ngcono kakhulu.
Ngaphezu kwalokho zezimila, phytic acid okuqukethwe kuncike indawo kanye indlela kulinywe. Ngokwesibonelo, kuba isikhathi eside kulezo zimo lapho isikhule ukusetshenziswa iphesenti eliphezulu okuqukethwe umquba phosphatic.
Iningi kuwukuthi bran kanye imbewu. Ngakho-ke, izinzuzo oat bran lufakwa ngaphansi omkhulu uphawu lombuzo. Uma angenamvubelo cocoa ke basuke futhi eziqukethwe elikhulu lemali phytic acid. Ithebula elingezansi uhlu ukudla umthwalo izibalo.
Ngeshwa, ubufakazi obandayo bokuthi uqinisekise ukuthi ukudla nge wokuqukethwe lelisetulu phytic acid iba imbangela kwamaphutha amaminerali emzimbeni. Ngakho, labo abasebenzisa obuningi, izifo ezivamile ezifana kwamathambo kanye yamathambo.
Uma ukudla okunjalo iyaqhubeka isikhathi eside, umzimba kubambezela. Mineral iqala indlala isiteleka. inqubo akuyona njengoba ezibucayi abadala kanye nezingane. Umzimba elikhulayo amandla anjalo igcwele ukuthuthukiswa ezibuthakathaka nohlaka lwamathambo, onesiqu esifushane, namazinyo okungenamsoco, nemihlathi ewumngcingo, futhi kuholela anaemia ngisho retardation engqondo.
Iqiniso lokuthi phytic acid has mphumela oluye lwaboniswa ngisho phakathi nekhulu leminyaka eledlule by Edward Vellanbi. Wakwazi ukufakazela ukuthi okusanhlamvu vysokofitinovnye eziphula ukuthuthukiswa kwe-lwamathambo uhlelo kanye vitamin D umzimba, okuholela yamathambo iqala. Kodwa vitamin D uyakwazi zokuyithena acid ngezinga elithile.
Ukuhlolwa luye lwabonisa ukuthi okusanhlamvu lonke, uma kuqhathaniswa nabangu-irayisi elimhlophe nofulawa unbleached kukhona namaminerali ngaphezulu. Kodwa ngesikhathi esifanayo ziqukethe phytic acid nokuningi.
Ngakolunye uhlangothi, liye kungase kutholakale ukuthi uma ngesikhathi esifanayo ukuze ungeze ascorbic acid, kuyoba kakhulu ukunciphisa imithelela elimazako phytic.
Kamuva, ngo-2000, ngiye eziningi izifundo lapho efakiwe nezinye izinto ukuthi singadambisa acid elimazayo. Iron kanye yi-keratin uvithamini A, kudala eziyinkimbinkimbi, ukungayeki ngokwabo ukuncela phytic acid.
Phytase ekunakekelweni kwezempilo
Ngo ukudla isitshalo, equkethe ketshezi izincwadi esizifundayo, futhi liyatholakala, okuyinto neutralizes umphumela lokukhululwa phosphorus. Lalibizwa ngokuthi phytase.
Kuyinto ngenxa phytase abanankinga nge phytic acid ruminants. Le into itholakala umzimba wabo, kwelinye izingxenye esiswini. Labo izilwane ezithinta umuntu esiswini, futhi ekhiqizwa phytase. Kodwa senani incane izikhathi eziningana kwelokuqala. Kodwa kulo mqondo, amagundane lucky: lezi phytase izikhathi engaphezu kwamashumi amathathu njengoba kuqhathaniswa indoda. Yingakho igundane kunjalo akukho ngowabo ungadla wokudla inqwaba.
Kodwa umzimba womuntu isebujameni enempilo has a acidosis acid igciwane lactobacili namanye amagciwane ukuthi ziyakwazi ukukhiqiza phytase. Ngakho-ke, ngisho noma eziningi imikhiqizo esetshenziswa, aqukethe phytic acid, neutralization kwenzeka ngenxa alawa magciwane, okwenza ukudla okuphephile.
It is wafakazela ukuthi kukhona ngenxa ukuhluma kwezinhlobo phytase ekunciphiseni phytic acid. Usizo kakhulu futhi sifakwe emanzini i-esidi uketshezi efudumele, isibonelo, ekulungiseleleni isinkwa esekelwe nhlama ebilisiwe.
Ngaphambi kwalokho, ngenkathi ezolimo awuzange lakhula ngezinga ezimbonini, abalimi elicwile ekusebenzelaneni amabele amanzi ashisayo, bese wabondla ezilwaneni.
Kodwa akubona bonke wokudla iqukethe lemali edingekile of phytase. Ngokwesibonelo, senani akuyona oats ngokwanele, amabele kanye irayisi elinsundu. Ngakho-ke, i-phytic acid oatmeal, nelayisi iphalishi Pshenko nge ukusetshenziswa njalo ngobuningi elikhulu, ngokwazo kwezinye izazi, kungase zingayilimaza impilo. Kepha ukolweni rye phytase okuningi. Futhi uma lezi okusanhlamvu ezimbili namanje cwilisa futhi ayabila, ke phytic acid lokulimaza akakwazi, bamane zinyamalale ngokuphelele.
Kuyinto ephawulekayo ukuthi at 80 degrees ngaphansi kwezimo ezivamile futhi ngesikhathi 55-65 ° in a ezinomswakama imvelo phytase ubhujiswe ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke kungcono ukuba ayiyeke le extrusion wonke-okusanhlamvu nesinkwa, uma ungafuni ukuthola ukuqunjelwa.
I-oats liqukethe kancane, kodwa uma ukufuthelana nje leyo ndawo ilahlekelwa umsebenzi nhlobo. Nokho, ngisho ekubhujisweni kwaso ngokwanele ukugaya ngesivinini. Ufulawa fresh phytase kuka kulowo owayemi ezinyangeni ezimbalwa.
Njengoba iwukudambisa phytic acid
Ukucupha phytase futhi acid kwehle ukutholakala fitonovoy eyodwa ukwelashwa ukushisa alanele. Kuyadingeka ukuba bathele cereal noma ubhontshisi endaweni ene-asidi. Khona-ke le nhlanganisela akwazi ukuqeda iningi phytate.
Cabangela indlela lokhu okwenziwa ngendlela isibonelo nge quinoa noma quinoa.
Uma umkhiqizo is abilisiwe imizuzu 25 ke sehliselwe 15-20% acid.
Lapho sifakwe emanzini amahora 12 kuya 24 ezingeni lokushisa inakekelwa lamadigri 20, futhi refluxing okwalandela shiya 60-77%.
Uma ukuziphatha ukuvutshelwa nge serum amahora 16 kuya 18 ebe egcina lokushisa 30, bese abilisiwe umkhiqizo uhlanzekile ngamaphesenti ukwanda ukuthi 82-88.
Lapho sifakwe emanzini isigamu ngosuku, imila amahora 30, lacto-ukuvutshelwa amahora 16 kuya 18 bese amaminithi abilayo phytic acid 25 siqedwa by 97-98%.
Futhi steeping, ukuhluma futhi usizo olukhulu ekuqedweni izinto, kodwa abakwazi ayibulale ngokuphelele. Ngokwesibonelo, lapho okuqukethwe e ibhali, ukolweni ubhontshisi oluhlaza it in an inani 57%, ukuhluma esebenza kahle kakhulu ukwedlula ukuthosa.
Lena indlela engcono kakhulu snizitsoderzhanie phytic acid ubhontshisi, kodwa hhayi ngokuphelele. Ngokwesibonelo, ngemva kwezinsuku ezingu-5 ukuhluma lentil luhlala cishe 50%, e iphuphu-ipea - 60%, futhi black uneso emabhontjisi - 25%.
Inqubo ngeke siphumelele ngokwengeziwe uma kwenziwe ngesikhathi ukuhluma lokushisa eliphezulu. Ngakho, ngo-92% wabhubhisa sieved. Nokho, lapho amazinga okushisa okuvamile, le nqubo isigaba ezinhle wokulungiselela for lungene ukususa izinto eziyingozi.
Phytic acid itholakala inani zizincane kakhulu ngemva ekwelapheni. Kodwa kungaba ngcono uma kuqala cwilisa umkhiqizo ukuze, lapho kukhona phytase ezengeziwe, ngaphambi ukwelashwa ukushisa.
Ngo corn, soy, unyaluthi namabele ngoba sifakwe emanzini usuku olulodwa okuqukethwe acid lehla 40-50%. Ngo okusanhlamvu nokuyimidumba - by 16-20%.
Ukuze okusanhlamvu, aqukethe semali phytase (lokhu rye futhi umkhiqizo kakolweni), kungcono ukwenza ukuziqalela. ezine kuphela amahora ufulawa kakolweni at 33 degrees izohamba mayelana 60% acid. Lwalungabola bran amahora ayi-8 ukunciphisa okuqukethwe 45%. Uma ukubambelela nhlama ebilisiwe ukuvutshelwa ngesikhathi 8 amahora, ukolo wonke isinkwa e phytic acid asihlali nhlobo.
Ukuhlolwa luye lwabonisa ukuthi uma ekhaya baking imvubelo isetshenziswa ukukhiqizwa yezimboni, umphumela kuyoba kude kancane ngempumelelo. Ngokwesibonelo, e wholemeal isinkwa imvubelo iqhubeka kuphela kusuka 22 kuya 58% phytin.
Norma phytic okuqukethwe acid ukudla
Yiqiniso, akudingekile ukulishiya ngokuphelele kusukela imikhiqizo phytic acid. Into esemqoka - ukuba baqonde indlela ukunciphisa okuqukethwe kwayo, futhi ukukwenza. Khona-ke phytic acid imikhiqizo ukudla izohlala ezingeni elamukelekile.
Ngokuthakazelisayo, ukudla emazweni ehlukene ukukala okuqukethwe yalolu ketshezi lihlukile:
eMelika - kuba 631 mg;
e-UK - 764 mg;
Sweden - 180 mg.
Uma ekhona ukudla Ukudla nge wokuqukethwe eliphezulu amavithamini A, C, D, ne-calcium, izinga kwamafutha kanye nemifino lacto-isibilile, ke kunjalo, ngokuvamile evamile. Ukuze umuntu onempilo enhle, imfuyo okuqukethwe kuvunyelwe ngaphakathi kwemikhawulo 400-800 mg. Labo babe namazinyo ephukile amathambo kuwohloka, ukusetshenziswa kwalo kufanele kushintshwe 150-400 mg.
Ukudla ewusizo okufanele ukuqukatha ngaphezulu 2-3 servings ukudla okuphekwe ngendlela efanele kusukela umkhiqizo lapho phytic acid kuqukethwe. Uma bayaphela nsuku zonke, ke kuyoletha izinzuzo emzimbeni. Kodwa uma imikhiqizo enjalo kukhona ukudla main, angadala izinkinga zezempilo.
Ukusetshenziswa phytic acid
Uzokwenza kufanele kubhekwe, futhi kolunye uhlangothi lolu daba. Awukwazi ukusho lutho kodwa izinkinga athwala phytic acid. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ngakho kuyahambisana umuntu.
Ngo umkhakha, phytic acid isetshenziswa njengophawu yemifino umsuka ukudla okufakiwe, ngokuthi E391a. Emkhakheni wezokwelapha yengezwe umuthi wokwelapha isimiso sezinzwa futhi isibindi.
Ngisho e Cosmetology izidakamizwa ezitholakele isicelo yayo njengendlela inqubo yokuhlanza - uyaxebuka. Izinto zokusetshenziswa etholwe Kulokhu, izikhwebu ukolweni ikhekhe. Eliphathisa hhayi ngempumelelo kuphela exfoliates esikhumbeni, kodwa nokulwisana nokukhubazeka lesikhumba nokuvuvukala. Anazi ngisho obulimaza isikhumba uhlala umuntu azalwa nalo lokuhlaziya le nqubo, eyenziwa nezinye izidakamizwa.
Muva nje ngenkuthalo acid ungeze ekukhiqizeni utshwala zokuhlanzwa imikhiqizo yensimbi. Kodwa lapho imisebenzi avele ngezingozi ketshezi, sanquma ziwushiye.
Namuhla kuyinto umbono ludale kuyinto phytic acid ukudla. Ithebula kulesi sihloko kuzokusiza siyixazulule indlela yokunciphisa okuqukethwe yayo ukudla ngaphambi kokuba kudliwe.
Kuyaphawuleka ukuthi okwamanje ukunikeza wena ukudla okunempilo kungenziwa kuphela thina. Ngakho-ke, nquma ukuthi kubaluleke kangakanani kuwe futhi ukuthi ukuhlanganyela izinto zokupheka kancane, kodwa okuhle.
Lamanzi esiphethu "Slavyanovskaya": Ukwakheka, isicelo. Joint-Stock Inkampani "amaminerali amanzi Zheleznovodsk"
Kungani kuwusizo eJerusalema artichokes sikashukela?
Raspberry Pi 2: isicelo, ukufakwa kanye uxhumano
Amathiphu Wabasaqalayo - indlela thunga Bakey etshekile
Yengulube Elimnandi nemifino